अनिता श्रेष्ठ काठमाडौं - बिहीबार, चैत १९, २०७७
कोरोना संक्रमणको समयमा दिनरात नभनी खटिएर बिरामीको सेवा गरेका छन्, मलिकले।
मैले काम गरेको सबै रेकर्ड अस्पतालको पेपर रोस्टरमा लेखिएको छ। मैले ड्युटी गर्ने समयमा हाजिर गरेको छु। यसैलाई आधार मानेर दिनुपर्ने र सरकारले त्यो सबै जाँच गरेर हेरियोस् भन्ने उनको जोड छ।
उनी भन्छन्, 'हजारौं स्वास्थ्यकर्मीहरुले मैले जस्तै भत्ता पाएका छैनन्। तर, उनीहरु बोल्न सकिरहेका छैनन्। या त श्रम शोषण सहन बाध्य छन्। उनीहरु चुप बसिरहेका छन्। तर, यो मेरो समस्या हो। भत्ता नदिँदा मलाई अफ्ठ्यारो परेको छ र मैले नै यसको सामना गर्छु।'
आफैं कोरोना संक्रमित भएको १० औं दिनमा निको भई भोलिपल्ट सेवा दिन हाजिर भएका उनी ६० वर्ष माथिमा बुबाआमालाई संक्रमण हुने डरले कयौं दिन घरबाट टाढा रहे। 'तर, खै त यसको मुल्याङ्कन?', उनी प्रश्न गर्छन्।
फोनबाट उनलाई 'समर्थनका लाथि आउँ?', भन्दै सोध्ने गरेका छन्। तर, उनको उही जवाफ रहन्छ, ‘तपाइँको खाँचो छ भने आउनुस्। मलाई खाँचो छ त्यही भएर म यहाँ आएको हुँ।’
'म यहाँ आन्दोलन गर्न आएको होइन। यो मेरो रहर पनि होइन बाध्यता हो', उनले भने।
‘म शिक्षित मान्छे हो। म आफ्नो शिक्षा र विवेकशील क्षमताको कदर गर्छु। र, सही ठाउँमा यसको उपयोग गर्छु। मलाई खाँचो छ, त्यसैले म आएको हुँ। जसलाई खाँचो छैन हेर्दै, हाँस्दै गुडलक भन्दै जान्छन्।', अजितले भने।